eNasha.com - सोफा किन्न जाँदा त्यहीँ निदाइन्
७२ वर्षीया गेट्रड मुलरलाई बूढेशकालमा मज्जाले निदाउन सक्ने सोफाको आवश्यकता पर्‍यो । त्यसो त उनी सोफाको शौकिन पनि हुन् । त्यसैले आफ्नो पुरानो शोख पूरा गर्न उनी जर्मनीको लुब्ज शहरस्थित स्लम्बरल्याण्ड सोफा स्टोरमा पुगिन् ।
कुनै पनि चिज किन्नुअघि उनको बानी नै थियो, त्यो सामान कत्तिको टिकाऊ र भरपर्दो छ । त्यही कुरा जाँच्न उनी आफूले किन्ने सोफामा एक छिन बसिन्, एक छिन सुतिन् । तर उनी ढल्केकी मात्र के थिइन्, सोफाको जाँच गर्न भ्याउनुअघि नै उनी त्यहीँ निदाइन् ।
जब उनको निद्रा खुल्यो, उनी सुतेको कार्यालय बन्द भइसकेको रहेछ । भोकै रातभरि स्टोरमा अडिन उनको मनले मानेन ।
लुब्ज शहरका प्रहरी प्रवक्ताले भने- "यी हजुरआमा पक्कै पनि सोफामा पल्टिएपछि त्यहाँको नरमपनाका कारण निदाएको हुनुपर्छ र उहाँ पक्कै पनि कुनै कुनामा हुनुपर्छ । नत्र त उहाँलाई त्यहाँका कर्मचारीले पक्कै पनि देख्नु पर्ने हो !"
"शायद उहाँमा घुर्ने बानी थिएन होला, नत्र त त्यहाँका कर्मचारीले कोही सुतेको रहेछ भनेर चाल पाइहाल्थे होलान् ! तर बिना कुनै हल्ला उनी निदाएपछि त्यहाँका कर्मचारीले चालै पाएनन् ।"
"उनी राति न्रि्राबाट उठेपछि निकै मज्जाले तर्सिइन् । तर नजिकै फोन फेला परेपछि उनले ढुक्क भएर हामीलाई फोन गरिन्", प्रहरी प्रवक्ताले भने- "उनी त्यहाँको सोफाको स्तरबाट निकै प्रभावित भइन् तर त्यहाँका कर्मचारीको लापरवाहीबाट निकै नै क्रूद्ध पनि थिइन् । बूढी आमैले सोफा किनेँ भने त्यहीँबाट लैजान्छु भन्दै थिइन् ।"